Sawir qaadista saaxiibkaa kuugu dhow ee Birds Birds Stella POP! | Androidsis
Haa, horay ayaynu u nahay mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee 'Rovio' ee leh shimbiraha duurjoogta ah ee ay ku caan baxeen kuwaas oo in badan siiyay Studio-ga ciyaarta fiidiyowga sannadihii la soo dhaafay. Cinwaanka cusubi waa Birds Birds Stella POP! oo raac wixii jiray Shimbiraha Xanaaqsan ee ugu caansan Stella la sii daayay dayrtii hore ee Android.
Markan gudaha geli Stella iyo asxaabteeda hawlgal lagu badbaadinayo kuwa qalafsan ee wax u dhimaya isla markaana hoos u dhigaya isla cadawgii hore sida ay yihiin doofaarrada yar yar ee sharka ahi. Inkasta oo ay raacdo sheekada Stella, maxay tahay ciyaarta ama ciyaarta ayaa gebi ahaanba ka duwan wixii ugu horreeyay. Halkan waxaan ku haynaa nooc toogto ah oo leh sawir gacmeed kaas oo aan u baahan doonno inaan ka bilowno goobooyin kala duwan si istiraatiijiyad ahaan loogu qarxiyo koox wanaagsan oo iyaga ka mid ah oo isku midab ah.
1 Farshaxanka lagu garto sida loo isticmaalo slingshot
3 Soo degso dalabka
Farshaxanka lagu garto sida loo isticmaalo slingshot
Halkan khibradeena ku jirta ogaadaan sida si sax ah loo higsanayo iyo waqtiga saxda ah si loo dhameystiro mid kasta oo ka mid ah heerarka taas ayaa na gelin doonta imtixaanka. Markaan baabi'inno doofaarrada waxaan heli doonnaa awoodo cusub oo aan u adeegsan karno si aan ugu fududeyno horay u socoshada qamaarkaan cusub ee Rovio halkaas oo ay ku leeyihiin shimbiraha waalan sida mar labaad.
Ma ahan in Rovio uu ku soo bandhigi doono nooc cusub kulankaan fiidiyowga ah, maaddaama aan la kulanno mawduuc si fiican u burbursan in muddo ah, laakiin shaqada wanaagsan, tayada farsamada, sawirada ku habboon, midabkaas oo ku dhowaad ka muuqda shaashadda iyo adeegsiga waqtiga umpteenth ee asalkiisii ​​caadiga ahaa ugu dambeyntii u horseeda natiijo gaar ah Birds Birds Stella POP!
Ciyaar fiidiyoow ah waxaad geli kartaa qaybta Candy Crush Saga iyo mid ka mid ah Rovio lafteeda waa sidee jolly jam, ciyaaro midabo badan leh iyo a gameplay aad u fudud in jillaab nooc kasta oo adeegsade ah oo leh taleefan casri ah. Ciyaar fiidiyow ah oo madadaalo leh laakiin taasi kama gudubto tan. Waxaad ku haysataa bilaash Dukaanka Play-ka oo leh iibsashada kugu habboon ee arjiga ku jirta maadaama aysan si kale noqon karin
Shimbiraha careysan ayaa Stella POP!
La ciyaar saaxiibbada
Iyadoo aan la iska yeelyeelin badan
Soo degso dalabka
Shimbiraha careysan Shooter xumbo POP
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Shimbiraha cadhooday » Ku cusub Rovio waa Shimbiraha Xanaaqsan Stella POP!